အသက် 24 နှစ်အရွယ် ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ တောင်အမေရိကကြယ်ပွင့်ကို ရာဇဝင်ပြိုင်ဘက်လီဗာပူးလ်နဲ့ အပြိုင်လိုက်နေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် - Myanmar Globe
အသက် 24 နှစ်အရွယ် ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ တောင်အမေရိကကြယ်ပွင့်ကို ရာဇဝင်ပြိုင်ဘက်လီဗာပူးလ်နဲ့ အပြိုင်လိုက်နေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက်
15/12/2021 Admin Knowledge 0
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပေါ်တိုအသင်း ‌တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး လူးဝစ်ဒီယက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တော်တော်များများကတော့ အသင်းတိုးတက်ဖို့အတွက် ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ကစားသမားအသစ်တွေ ခေါ်ယူဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ နည်းပြသစ်ရဲ့ ကစားကွက်မှာ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ကွင်းလယ်ခံစစ်ကစားသမားတစ်ဦး မဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့ အသံတွေထွက်နေသော်လည်း Fichajes (IBT မှတဆင့်) မှဖော်ပြချက်များအရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသည် ပေါ်တိုအသင်း ‌တောင်ပံတိုက်စစ်မှူ Diaz ကိုခေါ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုဆိုသည်။
သရဲနီတွေရဲ့ ဒီရာသီတိုက်စစ်စုဖွဲ့မှုဟာ လုံလောက်မှုရှိပေမယ့် ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အီဒင်ဆင် ကာဗာနီတို့အတွက် ရေရှည်အစားထိုးမှုတွေ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပေါ်တိုအသင်းကြယ်ပွင့်တိုက်စစ်မှုး လူးဝစ်ဒီယက်ဇ်ဟာ တောင်ပံထွက်ကစားနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ကောင်းကောင်း အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း နည်းပြသစ် Ralf Rangnick ၏ ဘက်မှ အသက် 24 နှစ်အရွယ် ကစားသမားကို ခေါ်ယူရန်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုအချို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ လီဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီးတို့ဟာ ဒိုင်ယာ့ဇ်ရဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးရေး အတွက် ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ သိရပြီး အပြောင်းအ‌ရွှေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့ အသဲအသန်ကြိုးစားနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ လက်နှေးရင်တော့ နာမည်ကြီး ထမင်ငတ်ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ တိုက်စစ်မှုးမရှိဘဲ ကစားနေရတဲ့ စီးတီးဘက်ကတော့ ပေါ်တိုကြယ်ပွင့်ကို အသဲအသန်လိုက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးလ်ဘက်ကလည်း ဇန်နဝါရီမှာ အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မိုဆာလာနဲ့ မာနေးတို့ကို အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကို စေလွှတ်ရဖို့ ရှိနေလို့ တိုက်စစ်မှု ရှာပုံတော်အသဲအသန်ဖွင့်နေတာပါ။
အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားပြိုင်ပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများကို ကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လီဗာပူးအသင်းသည် ဆာဒီယိုမာနေးနှင့် မိုဟာမက်ဆာလာတို့ကို တစ်လခန့် ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ဆာလက် နဲ့ မာနေး တို့ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် တစ်လျှောက် လီဗာပူး အသင်း အတွက် သွင်းဂိုး 62 ဂိုး အနက် 30 ဂိုး သွင်းယူ ထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှာ အော်ရီဂီနဲ့ ဂျိုတာတို့ ကျန်နေသော်လည်း ပေါ်တိုကြယ်ပွင့်ကို ဇန်နဝါရီတွင် အငှားဖြင့်ခေါ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေပြီး ရာသီအကုန်တွင် အပြီးသတ်စာချုပ် ချုပ်ဖို့ လီဗာပူးလ်ဘက်က အလိုရှိနေသည်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ လီဗာပူး ပစ်မှတ် လူးဝစ်ဒိုင်ယာ့ဇ်ဟာ ဒီရာသီမှာ ပေါ်တိုအသင်းအတွက် ကောင်းမွန်စွာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ Diaz ဟာ ပေါ်တိုအသင်းအတွက် 22 ပွဲမှာ 13 ဂိုးသွင်းယူထားပြီ3းဂိုးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ သူက လောလောဆယ် ပေါ်တိုရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူးအဖြစ် မကစားရသေးပေမယ့် သူ့ရဲ့သွင်းဂိုး ကိန်းဂဏန်းတွေက အထင်ကြီးလေးစားစရာပါ။
အသက် 24 နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုလည်း ရှိနေပြီး 31 ပွဲမှာ 7ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့သွင်းဂိုး ၄ဂိုးနဲ့ ကိုလံဘီယာအသင်းကို တတိယနေရာ ရရှိအောင် ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ Diaz ဟာ Lionel Messi နဲ့ တူညီတဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ကို သွင်းယူခဲ့ပြီး အထင်ကြီးစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ကစားသမားဘက်ကတော့ မန်ယူနိုက်တက် သို့မဟုတ် လီဗာပူးလ်ကိုပြောင်းပြီး ကစားသမားဘဝနောက်တစ်ဆင့် တက်ဖို့ အားသန်နေပါတယ်။ ပေါ်တိုအသင်းအနေနဲ့ကလည်း ဒီရာသီမျာ ချန်ပီယံလိဂ်ကထွက်ခဲ့ရပြီမို့ သင့်တော်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးရရှိပါက လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိနေပါတယ်။ ကဲ GG Man United ပရိတ်သတ်ကြီး‌ရေ ပေါ်တိုမှာ ခြေစွာနေတဲ့တောင်ပံတိုက်စစ်မှုးကို ကျွန်တော်တို့ ယူနိုက်တက်ကပဲ သရဲနီတစ်ကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်မလား..? ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ဘက်လီဗာပူးလ်ကပဲ လက်ဦးမှုရယူသွားမလားဆိုတာကတော့……
Ref – Sportskeeda
By – Wayne
အသကျ 24 နှဈအရှယျ ပျေါတိုအသငျးရဲ့ တောငျအမရေိကကွယျပှငျ့ကို ရာဇဝငျပွိုငျဘကျလီဗာပူးလျနဲ့ အပွိုငျလိုကျနတေဲ့ မနျယူနိုကျတကျ
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပျေါတိုအသငျး ‌တောငျပံတိုကျစဈမှူး လူးဝဈဒီယကျဇျကို ချေါယူဖို့အတှကျ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ အပွိုငျအဆိုငျ ကွိုးပမျးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျပရိတျသတျတျောတျောမြားမြားကတော့ အသငျးတိုးတကျဖို့အတှကျ ဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျမှာ ကစားသမားအသဈတှေ ချေါယူဖို့ မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ နညျးပွသဈရဲ့ ကစားကှကျမှာ အဓိကလိုအပျနတေဲ့ ကှငျးလယျခံစဈကစားသမားတဈဦး မဖွဈမနခေျေါယူဖို့ အသံတှထှေကျနသေျောလညျး Fichajes (IBT မှတဆငျ့) မှဖျောပွခကျြမြားအရ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ပျေါတိုအသငျး ‌တောငျပံတိုကျစဈမှူ Diaz ကိုချေါယူရနျကွိုးစားနသေညျဟုဆိုသညျ။
သရဲနီတှရေဲ့ ဒီရာသီတိုကျစဈစုဖှဲ့မှုဟာ လုံလောကျမှုရှိပမေယျ့ ခရဈစတီယာနို ရျောနယျဒိုနဲ့ အီဒငျဆငျ ကာဗာနီတို့အတှကျ ရရှေညျအစားထိုးမှုတှေ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ပျေါတိုအသငျးကွယျပှငျ့တိုကျစဈမှုး လူးဝဈဒီယကျဇျဟာ တောငျပံထှကျကစားနိုငျပွီး သူ့ရဲ့ အရှိနျအဟုနျနဲ့ ဂိုးပေါကျခွိမျးခွောကျမှုတှကေ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးကို ကောငျးကောငျး အကြိုးသကျရောကျစနေိုငျပါတယျ။
သို့သျောလညျး နညျးပွသဈ Ralf Rangnick ၏ ဘကျမှ အသကျ 24 နှဈအရှယျ ကစားသမားကို ချေါယူရနျအတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှုအခြို့နှငျ့ ရငျဆိုငျရမညျ ဖွဈသညျ။ လီဗာပူးနဲ့ မနျစီးတီးတို့ဟာ ဒိုငျယာ့ဇျရဲ့ လကျမှတျရေးထိုးရေး အတှကျ ပွိုငျဆိုငျနကွေတယျလို့ သိရပွီး အပွောငျးအ‌ရှဖွေ့ဈမွောကျဖို့ အသဲအသနျကွိုးစားနကွေပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ လကျနှေးရငျတော့ နာမညျကွီး ထမငျငတျဖွဈဖို့ မြားပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ တိုကျစဈမှုးမရှိဘဲ ကစားနရေတဲ့ စီးတီးဘကျကတော့ ပျေါတိုကွယျပှငျ့ကို အသဲအသနျလိုကျဖို့ ရှိနပေါတယျ။ လီဗာပူးလျဘကျကလညျး ဇနျနဝါရီမှာ အဓိက ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ မိုဆာလာနဲ့ မာနေးတို့ကို အာဖရိကဖလားပွိုငျပှဲကို စလှေတျရဖို့ ရှိနလေို့ တိုကျစဈမှု ရှာပုံတျောအသဲအသနျဖှငျ့နတောပါ။
အာဖရိကနိုငျငံမြားဖလားပွိုငျပှဲတှငျ သကျဆိုငျရာနိုငျငံမြားကို ကိုယျစားပွုမညျဖွဈသညျ့အတှကျ လီဗာပူးအသငျးသညျ ဆာဒီယိုမာနေးနှငျ့ မိုဟာမကျဆာလာတို့ကို တဈလခနျ့ ဆုံးရှုံးရမညျဖွဈသညျ။ ဆာလကျ နဲ့ မာနေး တို့ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ တဈလြှောကျ လီဗာပူး အသငျး အတှကျ သှငျးဂိုး 62 ဂိုး အနကျ 30 ဂိုး သှငျးယူ ထား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ လီဗာပူးလျတိုကျစဈမှာ အျောရီဂီနဲ့ ဂြိုတာတို့ ကနျြနသေျောလညျး ပျေါတိုကွယျပှငျ့ကို ဇနျနဝါရီတှငျ အငှားဖွငျ့ချေါယူရနျကွိုးပမျးနပွေီး ရာသီအကုနျတှငျ အပွီးသတျစာခြုပျ ခြုပျဖို့ လီဗာပူးလျဘကျက အလိုရှိနသေညျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နဲ့ လီဗာပူး ပဈမှတျ လူးဝဈဒိုငျယာ့ဇျဟာ ဒီရာသီမှာ ပျေါတိုအသငျးအတှကျ ကောငျးမှနျစှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ကစားသမားတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ Diaz ဟာ ပျေါတိုအသငျးအတှကျ 22 ပှဲမှာ 13 ဂိုးသှငျးယူထားပွီ3းဂိုးဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ သူက လောလောဆယျ ပျေါတိုရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူးအဖွဈ မကစားရသေးပမေယျ့ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုး ကိနျးဂဏနျးတှကေ အထငျကွီးလေးစားစရာပါ။
အသကျ 24 နှဈအရှယျ ကစားသမားဟာ ကိုလံဘီယာနိုငျငံအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ မှတျတမျးတဈခုလညျး ရှိနပွေီး 31 ပှဲမှာ 7ဂိုးသှငျးယူထားနိုငျပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ကိုပါအမရေိကပွိုငျပှဲမှာ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုး ၄ဂိုးနဲ့ ကိုလံဘီယာအသငျးကို တတိယနရော ရရှိအောငျ ကူညီနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျမှာ Diaz ဟာ Lionel Messi နဲ့ တူညီတဲ့ ဂိုးအရအေတှကျကို သှငျးယူခဲ့ပွီး အထငျကွီးစရာကောငျးခဲ့ပါတယျ။
ကစားသမားဘကျကတော့ မနျယူနိုကျတကျ သို့မဟုတျ လီဗာပူးလျကိုပွောငျးပွီး ကစားသမားဘဝနောကျတဈဆငျ့ တကျဖို့ အားသနျနပေါတယျ။ ပျေါတိုအသငျးအနနေဲ့ကလညျး ဒီရာသီမြာ ခနျြပီယံလိဂျကထှကျခဲ့ရပွီမို့ သငျ့တျောတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးရရှိပါက လကျခံနိုငျဖှယျရာ ရှိနပေါတယျ။ ကဲ GG Man United ပရိတျသတျကွီး‌ရေ ပျေါတိုမှာ ခွစှောနတေဲ့တောငျပံတိုကျစဈမှုးကို ကြှနျတျောတို့ ယူနိုကျတကျကပဲ သရဲနီတဈကောငျအဖွဈအသှငျပွောငျးပေးနိုငျမလား..? ဒါမှမဟုတျ ပွိုငျဘကျလီဗာပူးလျကပဲ လကျဦးမှုရယူသှားမလားဆိုတာကတော့……
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွက် ယူနိုက်တက်အသင်း၏ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများနှင့် သတင်းထွက်နေသော ကစားသမားများ